कथा- शक्ति | Nepal Pati
ब्राजीलमा वर्षाको मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुग्यो
- सीता ओझा- अध्यक्ष महिला अध्ययन केन्द्र
” ए साहिली भाउजु, मलाई आज निकै अप्ठेरो पर्यो । सय रूप्याँ भए ल्याउनु न हाउ ! ” कमलाले जस्केलाको छेउबाट अलि ठुलै स्वरमा चिच्याइन । ” के भनेकी ? कहाँ पाउनु ? छैन हाउ छैन! ” साँहिलीले पनि आँगनको डिलबाटै चिच्याइन र छोरो स्कुल पुर्याउन हतारिदै दुगुरिन ।
तल्ला घरे साइला घरैमा सटर पटर गर्दै थिए । कमला घर भित्र पसेर जुठो चुलो पुछेर गोबरले लोटाउन थालेकी मात्रै थिइन । साइलाले ” कमला कमला ” भनेर मायालु पाराले बोलाए ।
कमला लोटाउदै गरेको गोबरको डल्लो सहितै हतारिदै बाहिर निस्केर हजुर भनिन् । ” ए तिमीले सय रूपैया मागेको हैन र ! ल लिन आउ ” साहिलाले कमलालाई इसाराले बोलाउदै सयको नोट देखाए ।
कमलालाई सय रूपैयाको निकै संकट परेको थियो । साँझै देखि यता र उता गरेकी कमला सय रूपैयामा निकै भौतारिएर पनि थाकेर बसेकी थिइन । साहिला दाइले पैसाको अड्को काटिदिने भए भनेर कमला दौडेर साहिलाको घरतिर गइन ।
साइला बिस्तारै दैलोको जस्केलोको भित्रपट्टी छिरे । ढोका साँगुरो थियो तर पनि आधा जति कमलालाई छिर्ने ठाउँ राखिदिए र अझै भित्र पट्टि कोल्टिएर बसे । कमलाको मुहारमा निकै खुसि भित्र्याएको थियो ।आँगननै बाट हाँस्दै साहिला दाइलाई धन्यवाद दिदै छेउमा पुगिन । तर साहिला दाइ अझै भित्र छिरे ।
कता भित्र पस्नु भा ! दिनु न दिनु , मलाई हतार छ भन्दै कमला ढोकाबाट छिरेकी मात्रै थिइन । साहिलाले च्यापै छातीमा अठ्याए । कमला आतिएर कराइन । साहिलाले एउटा हातले छातीपट्टि अठ्याए । अर्को हातले मुख थुने ।
कमला यताउता गर्नै सकिन । कमलाले खुट्टा र दाहिने हात यता उता गर्दै थिइ । ” ऐया ! राडले टोकी पो त । कुरै बुझ्दिन । एकछिन रमाइलो गरौ भनेको त । ऐले तेरी बजै आउछे फेरि !” भने साहिलाले
त्यतिकैमा कमला फुतै फुत्किइ । दौडेर आफ्नै घरमा आइ । मन धमिलो भयो । पैसाको अड्को टर्ला भनेको के भयो ? के भयो ?
छक्क परि । गोबरको हात धुदै थिइ । साहिली भाउजू छोरो पुर्याएर फर्केको देखि । साहिली भाउजुलाई देख्ने वितिकै साहिलाको सबै चर्तीकला देखिन भनेर कमला पानी पानी भइन ।
मन डरले थुरै भयो । शरीर गल्यो । पिसाब नै चुइयो । ओठ तालु नै सुक्यो । कुरा भनौं कि नभनौं भयो । भन्न सक्ने कुरै भएन । भित्र छिरेर ओछ्यानमा घोप्टेर रून थालिन ।
मनमा अनेकौं तरङ्हरूले ऐँठन होला जस्तो भयो । श्रीमानलाई सम्झिन । सिँउदोको सिदुर र गलाको पोतेमा हात राखेर राम राम जपिन । धन्न मेरो सतित्व जोगाइ दियौ नि ! भगवान भनेर भक्कानिएर रोइ ।
कमलालाई अच्चम लाग्यो । घरमै अँगाला भरिकी श्रीमती छ । छोराछोरी घरभरि छन । छोरा भएन भनेर साहिली भाउजुले दाइलाइ लिएर कहाँ गइन् र ! तर अन्तिममा दिक्क भएर थन्कने बेलामा गर्भ बसेछ । कहिँ जचाँउन पनि नगइ छोरा जन्मियो र हर्ष बढाइ नै गरे तर बुढेसकालमा पनि साहिलाको बैँस चढेको देखेर कमला छक्क परि । लोग्ने मानिसको निचता देखेर दिक्क मानि ।
त्यही हर्ष बढाँइले कमलालाई उनीहरू सगँ नजिक बनाएको थियो । साहिलाको थर र कमलाको माइतीको थर मिलेको कारण दाइको नातो लागेको कुरा सम्झेर झन कोकाउदै रून थाली । कमलाको श्रीमानको जागिर भएकोले प्राय जिल्ला बाहिरै बस्थे । कमलाका पनि चारवटी छोरी जन्मिएकोले पति र घरतिर खुसि थिएनन् । यस्तो घटना घट्यो । कसलाई भन्ने होला भन्दै कमला खुब छट्पटी तर दिनभरि घोत लिदा पनि निकास देखिन । विद्यालय छुट्टि भएर सबै छोरीहरू घर आए ।
विहानको घटनाले तनाव भएर कमलाले खाजा बनाउनै भ्याइन । खाजामा चिउरा दालमोठ दिनु पर्यो भनेर निकाल्दै थिइ । थाहै नपाइ सबै पोखिए छ । छोरीले “ए ममि सबै चिउरा पोखियो त के गरेको ? “भनेपछि पो थाहा पाई त !
साँझ पनि कमलाले गुन्द्रुक र भात खाने भनेर पकाउदै थिइन् । सबै गुन्द्र’क डढेर तितो न तितो भएछ । छोरीहरूले भातको डल्लाडल्लै टोके । ममिलाई आज के भयो हँ ? ठुल्ली छोरीले सोधि। “कमलाले आतिदै केही भा छैन ” भनी । कमला र छोरी भएर भाँडा माँझे ।
भाडा र मान्छे दुवै निर्जिव नै हुन कि भने जस्तो गरि कमला टोलाएको देखेर छोरीले फेरि सोधी, ” ममि आज तपाईंलाई केही न केही चाहिँ पक्कै भएको छ । किन भन्नू हुन्न ” भन्दै छोरी रूदै चिच्याइ ।
कमलाले मन रोक्न सकिन । डाको छोडेर रूदै भित्र छिरी र ओछ्यानमा घोप्टी । चारै वटी छोरीहरू छेउमा आएर ममि ममि भन्दै सुमसुम्याउन थाले । विहान हिड्दा हाँसी खुसि छोडेकी आमा एक्कासि यस्तो भएको देखेर छोरीहरू पनि समालिन सकेनन् ।
कमलाले बिस्तारै उठेर चारैवटी छोरीहरूलाई च्यापिन र रूदै भनि , ” म तिमीहरू कि आमा हुँ । छोरी जन्नेकोमा तिमीहरूको बाबा देखि घरपट्टिका कोही खुसि छैनन् । मामा घरतिर पनि कति आका हुन भनेर हेलाँ होचो व्यवहार गरेको देखेकै छौ । ”
एक्कासीको रूवाबासी सुनेर साहिली भाउजू सहित अरू पनि छिमेकीहरू कमलाको घरमा आए ।के कसो सोधे । कमलाले विसन्चो बहाना बनाएर छोरीहरू रोएका भनेर कुरालाई सामसुन पारिन ।
छिमेकीहरू एकछिन बसेर सबै निस्कीए । आज चारवटै छोरीहरूले आमालाई छोड्न सकेनन् । निकै बेर कुरा गरिरहे । कमला बेला बेला घुँक घुँक गर्थिन । छोरीहरू आतिन्थेँ । तर पनि आमाले भन्न नसकेको देखेर जेठी छोरीले भनी, ” ममि हजुरले समस्या लुकाउनु भयो भने रोग लाग्छ । हजुर रोगी हुनुभयो भने हामीले पढ्न लेख्न पाउदैनौ । अनि बाबाले झन हेप्नु हुन्छ । त्यसैले कुरा भनुस् न !
सबै मिलेर समस्याको हल गरौला नि ! ” भन्दा भन्दै फेरि रोइन । छोरीहरू फकाउदै थिए । कमलाले रूदै भनिन्, मलाई जस्तो आपत तिमीहरूलाई नपरोस् नि …..! भन्दै कस्सि कस्सि अझै रोइन । छोरीहरू पनि रोए ।
एकछिन रोएपछि कमलाले छोरीहरूलाई विहानको सबै घटना भनिन् , छोरीहरू छक्क परे । जेठी छोरीले भनी , ” ममि यो त तपाई माथि भएको बलात्कारको प्रयास हो ,र यो अपराध हो । त्यसैले प्रहरी चौकीमा रिपोर्ट गर्नु पर्छ ।”
” अपराधीलाई छोड्यो भने , अरू माथि पनि फेरि अपराध गर्छ । त्यसैले छोड्नै हुन्न । भोलि चौकीमा उजुरी हाल्नु पर्छ । ” कमला झन अतालिइ । छोरी छोडि देउ,भो भो ! हाम्रो बेइजत हुन्छ । यस्तो कुरा सुनेर सबैले हामीलाई थुक्छन । नाइ छोरी , म अभागी रैछु । भन्दै रोइ रहि ।
छोरीहरूले आमालाई पानी खुवाए । विस्तारै ओछ्यानमा सुताए । छेउमै बसेर अनेकौ कुराले सम्झाए । छोरीले फेरि सोधि,अन्तिमा कमलाले दिउसोको पुरै घटना बताइ र छोरीहरूलाई च्यापेर फेरि रोइ । जेठि छोरीले सबै घटनाको क्रमबद्ध टिपोट गरेर निवेदन बनाइन ।आमालाई सहि गर्न लगाइन र मात्रै सबै सुते तर जेठी छोरीलाई रातभर छट्पटी नै भइरह्यो । आँखा झमक्क नपारी उज्यालो भयो ।
विहान हतारिदै चिया चमेना गरे । यति ठूलो अपराध त्यो पनि छिमेकका विश्वासिलो मान्छेबाट भएको कुरा कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने भनेर छोरीले सोचिरहेकि थिइन । एक पटक सरसल्लाह गरेर गर्न पर्छ कि छोरी भनेर कमलाले छोरीलाई भनेकी मात्रै थिइन ।
छोरीले भनिहालिन , ” हो नि ममि देवु सरलाइ सोध्नुपर्छ होला । उनी मानवअधिकारकर्मी पनि हुन । हामीलाई कानूनी कुरा पनि खास थाहा छैन । कार्वाहीको प्रकृया पनि थाहा छैन ।उजुरी गरेपछि नछुट्ने गरि गर्नु पर्छ । यी र यस्ता अपराधको समाधान नभए सम्म देवु सरले यताउता कुनै सम्झौता हुन दिन्नन् । त्यसैले हामीले उनैसगँ सल्लाह लिनु पर्छ ममि ”
दुबै देवुलाई भेट्न गए । निकै सूक्ष्म ढंगले घटनाको विश्लेषण गरे र अर्को निवेदन तयार परे । तिनै जना निवेदन लिएर सरासर प्रहरी चौकीमा गए । त्यो निवेदन दर्ता सगै जिउ ज्यान सुरक्षाको माग गरेर अर्को पनि निवेदन दर्ता गरे र निस्किए ।
एकै छिन पछि प्रहरीले पल्लाघरे साहिलालाई समातेर ल्याइ हाल्यो । साहिलाको घरमा कोकोहल मचियो । अपराध लुक्ने कुरै भएन । एककान दुइकान मैदान भयो । साहिली भाउजू र भाउजुका छोरीहरू फत्फताउदै कमलालाई कुट्न चिर्पट बोकेर आए ।
कमला आफ्नै घर हो के गर्लान र भनेर पिँढीमा बसेकी मात्रै थिइन । साहिली भाउजू तथानाम सराप्दै राडीलाई आज छोड्दीन भन्दै दौडेर आएर चिर्पटले हानी हालीन । कमलाको निधारबाट रगतको धारा बग्यो । प्रहरी दौडेर आउँदा आउँदै ढलिन ।
हतार हतार कमलालाई अस्पताल लान एम्बुलेन्स मगाए । छोरीहरूले घरको ताल्चा मारे । अर्का छिमेकीलाई गाई बाख्रा जिम्मा लगाएर आमासँगै एम्बुलेन्समा सबै छोरीहरू चढे । कमलाको निवेदन उपर छलफल भयो । साहिलाले कुरा सकार्न मानेन् । केस नमिल्ने देखे पछि प्रहरीले ढिला नगरि जिल्लालाई फर्वाड गरि हाले ।
कमलाको उपचार र न्यायको छलफल दुवै जिल्ला मै हुने भयो । जिल्ला पुग्ने बितिकै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीहरू कमलाको अवस्था बुझ्न अस्पताल गए ।जवरजस्ती गर्दाको प्रमाण केही छ भनेर सोधे । कमलाले दाहिने हातमा मैले मझैले टोकेकी छु हेर्नू होला भनिन ।
गएर हेर्दा दाहिने हातको हत्केला पछाडीको भागमा चोक्टो नै निकालेको देखियो । प्रहरीले साहिलालाई केरकार गर्न थाले । हैन भन्दै थिए । प्रहरीले मज्जाले चड्काए पछि ” हो हजुर गल्ती भयो माफ पाउँ ” भने ।
अब माफ त जेलमा गएर राम्रो व्यवहार देखायौ भने पाउछौ भन्दै बलात्कारको प्रयास गरेको विषयको अपराधमा प्रहरीको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर भयो । तीन महिना पछि अपराध सावित भएर जेलको सजाए र जरीमानाको फैसला जिल्ला अदालतले सुनायो ।
अदालत भित्र फैसला सुनेपछि कमला दौडेर बाहिर आइन र डाको छोडेर रोइन । सारा समाजतिर हेरेर “मलाई माफ गरिदिनु होला । मैले अपराध बोलेकी छैन । उसले मलाई बलात्कार गर्न प्रयत्न गरेको प्रमाण सवित भएर नै उसले सजाय पाएको हो । नबोलेकी भए समाजबाट म गलहत्तीन्थें । ”
“बेश्या कहलाउथें तर अन्याय सहनु हुन्न भनेर मेरा छोरीहरूले मलाई सिकाए । म अडे । त्यसैले आज मैले न्याय पाएं । हिजो छोरी नै छोरी जन्मे भनेर दुनियाँले मलाई हेपेको थियो । ”
“आज तिनै छोरी मेरालागि शक्ति बने । धन्यवाद मेरा छोरीहरूलाई , तिमीहरूको रक्षा मैले गर्नु पर्ने तर आज आमाको अस्मिता जोगाउने शक्ति बन्यो । ” भन्दै छोरीहरू तिर नमस्कार गरिन ।
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय यु...
विशाल नाल्बोका तीन कविता
फाली जुन दिन अलैँचीको भाउ घ...